129 Erskine, Glasgow, Airport, Loch Lomond Paisley - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguScott
Isigqeba esinesitayile esinebhedi esi-1 esinendlu ene-10min nje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGlasgow, i-15min ukusuka kumbindi wesixeko kunye ne-20min ukusuka eLoch Lomond, kutsha nje kwenziwe uphuculo olukhulu kulo lonke.
Ngokufikelela okugqwesileyo kunxibelelwano lwezothutho kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane eSkotlani kumgama nje omfutshane, le ndlu ibekwe kwindawo efanelekileyo kwiingcali kunye nabakhenkethi ngokufanayo.
Izinto eziluncedo zasekhaya kumgama wokuhamba.
Ipropathi ingahlala abantu aba-4.
Eli gumbi libanzi lokulala eli-1 linendlu, libonelela ngesiphelo esiphakamileyo, kodwa indawo esekhaya yokuhlala kwakho. Indawo yokuhlala iza nomabonakude we-LCD oyi-55”, i-cable tv package, ibroadband yemithombo yeendaba ezinyulu kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji/ifriji/i-oveni/i-microwave nempahla yokuhlamba impahla. Ipropathi inegumbi lokuhlambela langoku ngaphandle kwegumbi lokulala elikhulu kunye nomabonakude we-LCD.
Ipropathi inegadi ehonjisiweyo ejonge emazantsi, iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise ifanitshala yegadi.
Qaphela: Imirhumo eyongeziweyo isebenza kwilinen yebhedi yesofa kunye neetawuli ezongezelelweyo
Izibonelelo zabantwana: Isitulo esiphezulu, ibhedi yokuhamba kunye ne-buggy ingenziwa ifumaneke ngentlawulo encinci eyongezelelweyo.
• Isikhululo seenqwelomoya saseGlasgow (imizuzu eli-10)
• I-Braehead Shopping Centre kunye ne-Xscape (imizuzu eli-10. Apha uya kufumana iindidi ngeendidi zezinto ezenziwayo ukuze zilungele wonke umntu (i-indoor ski slope, mini yegalufa, ukukhwela amatye, uluhlu lweendawo zokutyela, ii-cocktail bars, iivenkile kunye ne-cinema enkulu yangaphakathi)
• I-Loch Lomond National Park (imizuzu engama-30)
• Iindawo zeKhonsathi yeHydro & SECC (imizuzu engama-20)
• Mar Hall Golf & Spa Resort (5 imizuzu)
• Ikhosi yeGalufa e-Erskine (imizuzu emi-5)
• Ingleston Country Club Bishopton (7 imizuzu)
• Erskine Bridge Hotel (imizuzu emi-3)
• Isikhululo sikaloliwe saseBishopton (kunye noqhagamshelo oluthe ngqo kwiZiko leSixeko saseGlasgow kunye neNdawo yokuPaka yaSimahla – imizuzu emi-5)
• Iziko leDolophu yasePaisley (imizuzu eli-10)
• Iziko leDolophu yaseGreenock (imizuzu engama-20)
• Ibrox Stadium – Rangers FC (15 imizuzu)
• Celtic Park – Celtic FC (35 imizuzu)
• Iziko leSixeko saseGlasgow (imizuzu eyi-15-20)
• Indawo ekudibanela kuyo i-M8 & M898 Motorways (imizuzu emi-3)
Izinto eziluncedo ekuhlaleni ziquka;
• I-Bridgewater Shopping Centre (i-10min yokuhamba) - ebandakanya iivenkile ezinkulu zeMorrisons kunye ne-Aldi, i-Whuppity Bar Restaurant, i-Chinese Restaurant, iindawo zokutya ezahlukeneyo ezikhawulezayo (i-Dani's Dinner, i-Subway, i-Greggs), i-Coffee Shop, iBhanki, ugqirha kunye notyando lwamazinyo.
• Iziko loLonwabo lase-Erskine kunye nePhuli lokuQubha (10min ukuhamba)
• iPandamonium Indoor Children's Play Centre nayo ikwindawo yokuthenga (12min walk)
• Iziko laseGadini leCaulder kunye neRestaurant (30min ukuhamba)
• Ipaki yeBoden Boo (20min ukuhamba)
• Newshott Island Local Nature Reserve (5min ukuhamba)
• Ipaki yokudlala yangaphandle (imizuzu eyi-10 uhamba nge-Inchinnan Village
• I-Grill kwi-Park Bar yokutyela (uhambo lwemizuzu eli-10 kwaye lubandakanya ivenkile yokuthatha iintlanzi kunye neChip.
• I-Braehead Tavern & Restaurant kukuhamba nje imizuzu eli-10-15 udlula kwilali yase-Inchinnan
Indawo ezolileyo, enobuhlobo nosapho enendawo yokupaka eyaneleyo.
Ilungu leqela lethu liya kwenziwa lifumaneke ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukuba unayo nayiphi na imiba